22 Haween ah oo tababar ku aadan maareeynta ganacsiga iyo harqaanka Muqdisho loogu qabtay
“Waxaan bartay sida dharka loo tolo, sida loo iibiyo loona garto faa’idada iyo qasaaraha uu leeyahay ganacsigeyga. Markii hore ma aan fahansaneyn xisaabta laakiin waxaan hadda awoodaa inaan sameeyo xisaab dejin sax ah,” sidaasi waxaa sheegtay Madina oo kamid ah haween la tababaray.
Madina waxa ay kamid ahayd 22 haween ah oo ka kala yimid degmooyinka Kaaraan, Boondheere iyo Yaaqshiid kuwaasi oo Muqdisho lagu baray xirfado shaqo. Tababarka waxa uu socday ilaa labo bilood waxaana lagu bartay maareeynta ganacsiga, wareejinta lacagta iyo sameenta dharka iyo daabacooda.
HIWA oo ah hey’ad maxali ah oo leh laabatan sano oo qibrad ah ayaa tababarkani hogaamineysay iyadoo wada shaqeyn la leh hey’adda CISP.
Haweenkaan 22-ka ah ayaa waxaa horay loogu tababar inay soo saaraan kastuumooyin haweenka ay isticmaalaan kuwaasi oo ay keentay Hey’adda CISP inay u qeybisyo gabdhaha dugsiyada dhigata.tababarkani ayaa ujeedkiisu ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa awoodda ay leeyihiin haweenkan sidaa darteed waxa ay awoodayaan inay caddeeyaan xirfadahooda ayna fursad fiican oo isku filnaan ah keento.
Qol weyn oo nidaamsan gudihiisa ayey haweenka ku shaqeynayeen iyagoo si wadajir ah u tollayey dhar cad-cad ah oo ay dhar kale ka soo jareen. Sidoo kale waxa ay toleen waxyaabo suuf ka sameynsan oo aad u qurux badnaa oo gacmahooda ay ku sameynayeen.
Waqtiyada qaar waxa ay daboolayeen qeyb kamid ah waxbarashada, macalimiinta tababarka waxa ay markii dambe ku hagayeen hawlo baraatiko ah kuwaa oo ay ugu lug yeelanayeen sidoo iyagoo ah haween ganacsato ah. waxa ay haweenkani booqdeen suuqyada gudaha si ay usoo fuliyaan qiimeyn dhanka ganacsiga ah, ayna ula xaajoodaan qiimaha ugu wanaagsan ee alaabaha ayna ku iibin karaan waxyaabihii ay soo saareen iyagoo hubinayo inay si sax ah u sameeyeen xisaabta dejinteeda.
Caaliyo waa mid kamid ah iyana haweenka la tababaray: “ Waxaan bartay tolliin cusub tallooyin iyo farsamo, waxaa laygu dhiiro-gelinayey inaan sii wado baraatikada ilaa aan ka fiicneeyo. Waxaan kaloo helay sirta ganacsiga ee guul i gaarsiin doonto.”
Munaasabad weyn oo lagu soo gunaanudayey gababadii mudadii uu socday tababarka ayaa la qabtay. Marti kala mataleysay maamulka iyo hey’adda hawsha fulisay ayaa xaadir ku ahaa. Dhar qurux badan oo haweenka ay sameeyeen intii waxbarashada u socotay ayaa lagu muujiyey darbiga hoolka ay xaflada ka dhaceysay.
Si ay ugu bilaawaan noolashooda gacansato ahaan, haweenkaasi ayaa mid weliba waxaa la siiyey harqaan, dun iyo daaqad baati ah. qaar baa waxa ay fursad u heleen inay ka hadlaan munaasabada intii ay socotay, “ anigoo ku hadlayo magaca asxaabta ka qeybgalayaasha, waxaan jeclaan lahaa inaan abaalkeena ku qeexo taageerada qiimaha badan ee nala siiyey,” sidaa waxaa sheegtay Madina.
Fariimaha ka soo baxayey hogaamiyayaasha iyo ururada bulshada ayaa ku egaa ka go’naashiyahooda ah inaytaageeraan haweenka maadama ay yihiin laf dhabarta bulshada.
W/D: Salaad Geeddi Cali ( U qaabilsanaha Xiriirka iyo la xisaabtanka)
Home 22 Haween ah oo tababar ku aadan maareeynta ganacsiga iyo harqaanka Muqdisho loogu qabtay